Bedelka Photos ka Computer si ay iPhone 4s / iPhone 5 / iPhone 4
> Resource > iPhone > Tutorial sidii aad u hagaagsan Photos ka Computer si ay iPhone
"Hi, waxaa. Midkiinna ma yaqaan haddii ay suurto gal ah in u hagaagsan sawirada kombiyuutar si ay iPhone 4s aan Lugood. Mararka qaarkood, ma doonayo in aan si hagaagsan oo dhan sawiro ka gal oo dhan si ay u iPhone, sababta oo ah waxay qaadataa meel aad u badan. Waxa aan u baahanahay waxaa syncing sawirada qaar ka mid ah soo xulay computer si iPhone in ay sii. walba oo soo jeedinaya la qadariyo doonaa. Thanks! "
Guud ahaan, Lugood waa qalab ugu horeysay ee dadka caadiga ah isticmaalaan si ay u hagaagsan sawirada kombiyuutar si ay iPhone. Si kastaba ha ahaatee, sida user ee kor ku xusan ayaa sheegay in, mar kasta oo waxa keliya oo kuu oggolaanaysa in aad u hagaagsan folder sawir (s) ka computer si iPhone, ma photos soo xulay. Xaaladdan oo kale, qaar ka mid ah sawirada la rabin waxaa lagu dari doonaa iPhone iyo mashquulin meel dheeraad ah. Si aad u hagaagsan sawirada kombiyuutar si ay iPhone, halkii Lugood, waxaan kuu soo jeedinaynaa in ay isku dayaan TunesGo Retro. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u hagaagsan photos loo baahan yahay kombiyuutar si ay iPhone muuqaal in 2 tallaabooyinka.
Download TunesGo Retro maxkamad version in ay isku day ah!
Fiiro gaar ah: Sida aad ka arki kor ku xusan, versions tareen u TunesGo Retro (Windows) iyo TunesGo Retro (Mac) ayaa la heli karaa si ay u soo bixi. Dooro version saxda ah sida ay your computer. Ka dib markii xirmo rakibo karaa, waxaa loo soo dajiyo on your computer. In socda, waxaan qaadi sawirada kombiyuutar dhoofinayo si la iPhone TunesGo Retro (Windows) sida tusaale.
Tallaabada 1. Daahfurka TunesGo Retro
Burcad TunesGo Retro isla markiiba ka dib markii ay ku rakibidda. Markaas isticmaali cable USB in iPhone yimaado leh in ay ku xidhmaan aad iPhone la kombiyuutarka. IPhone kasta, oo ay ku jiraan 6s iPhone (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5S iyo 5c iPhone, ordaya ee macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 ama macruufka 5 si buuxda u taageeray by MobileGo. Haddii xira si guul ah, aad iPhone iyo info aasaasiga ah waxa loo bandhigi doontaa TunesGo Retro uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. nidaameed sawirada kombiyuutar si ay iPhone 4s / 5/4 / 3GS
In bidix ee suuqa ugu weyn, waxaad ka arki kartaa "Sawiro". Riix saddexagalka xaq u ag inuu u muujiyo albums sawir. By default, waxaad ka arki kartaa Roll Camera iyo Photo Library. Laga soo bilaabo halkan, aad u hagaagsan kartaa sawiro ka computer si iPhone Photo Library ama albums cusub.
Si aad u hagaagsan sawirada kombiyuutar si ay iPhone Photo Library, guji "Photo Library" folder> guji-xagalka "Add" on sare ee suuqa kala inuu u muujiyo doorasho "Add Folder" ama "Add File" hoos. Markaas dhirtuba your computer si hagaagsan sawiro si iPhone.
Si aad u hagaagsan sawirada kombiyuutar si ay album cusub, fadlan xaq guji "Sawirro" iyo dooran "New Album". Waxa Magaca iyo double-riix si aad u furto. Laga soo bilaabo suuqa kala madhan, midkood guji "Add item" ama guji "Add" si hagaagsan sawirada kombiyuutar si ay iPhone. In labaad ah, waxaad ka arki kartaa sawirada doonayay on iPhone si xor ah.
Marka la barbar dhigo Lugood, TunesGo Retro waa la rogrogi karo. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u hagaagsan photos gal ah ama hal sawirada kombiyuutar si ay iPhone. Waxaa fudud in la isticmaalo.
Isku day TunesGo Retro si hagaagsan sawirada kombiyuutar si ay iPhone 4s / 5/4 / 3GS.
U dayactir Your iPhone Dhawaansho sensor Naftaada
Sida loo beddel iPhone 4 / 5S / 5 / 4s / 3GS / 3G bahal Guddoomiyaha